Muuri News Network » Wafdi ka socda Itoobiya oo Qorshe La Yaab leh u gaaray Somaliland & shir ka socda Hargeysa
Wafdi ka socda Itoobiya oo Qorshe La Yaab leh u gaaray Somaliland & shir ka socda Hargeysa
Magaalada Hargeysa ee xarunt Maamulka Somaliland waxaa maanta gaaray wafdi ka socda Dowladda Federaalka Itoobiya,halkaasi oo ay wada hadal kula leeyihiin madaxda maamulkaasi.
Madaxda ayaa diirada isla saaraya iskaashiga labada dhinac iyo xiisadaha mandiqada ka taagan.
Wasiirka gaadiidka ee dawladda Faderaalka Itoobiya Axmed Shide iyo xubno kasocda Wasaaradda Arrimaha dibada ee Faderaalka ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa, sidda ay baahisay warbaahinta gudaha ee magaalada Hargeysa.
Mr, Shide ayaa wada hadal gaar ah la qaatay Madaxweynaha Soomaliland Muuse BIixi Cabdi oo ay ka wada hadleen sidii taabagal looga dhigi lahaa heshiiska 19% faa’iidadiisa ay leedahay ee Dekeda magaalada Berbera.
Warar hoose oo aan helnay ayaa ku waramaya in laga wada hadlay sidii nabadda mandiqada loo ilaalin lahaa, gaar ahaana xiisadaha Tukaraq ayaa ka mid noqonaya arrimaha la soo qaadayo, maadaama horey ay labada dhinac uga wada hadleen.
Itoobiya ayaa leh saami wanaagsan oo ku aadan howlaha dekeda magaalada Berbera, markii ay Somaliland ku wareejisay dekedaas shirkadda DP WORLD ee laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta, waxaana wararku sheegayaan in ay Itoobiya hadda kasoo baxaysa doorkeeda.